Ingxelo ka-I-MAG (Umbutho wokusetyenziswa kweelwimi ezininzi) eya kumaphephandaba
Ngomhla we-16 Juni 2004
KULUTSHA LOMZANTSI AFRIKA: MALIVAKALE ILIZWI LENU!
Ngomhla we-16 kuJuni kowe-1976 ulutsha lwelizwe lethu lwakuvakalisa ukuyichasa kwalo inkqubo yolawulo ngegqudu. Ukubhiyozelwa kolu suku ayikokukhumbula nje loo mhla wenjilaphethu koko ngumsobomvu kwikamva lolutsha lwethu. Silindele ngolangazelelo loo mhla inkululeko ngokolwimi nemfundo eyiyo ziya kuba zingeyonto yabambalwa abababalweyo.
U-I-MAG uwuxhasa ngokupheleleyo uMgaqo woLwimi kwezeMfundo ophakamisa ukuba ukongeza kulwimi okanye iilwimi umntu asele ezithetha makube sisiseko semfundo yolutsha. Oku kuthetha ukuba ulwimi lweenkobe lumele ukuba lugcinwe lulolokufunda nolokuhlohla kuyo yonke le minyaka yokufunda esikolweni kumane kusongezwa ezinye iilwimi kolu lwenkobe. Okwangoku eli lungelo lisisiseko lisetyenziswa kwaye ligcinelwe abafundi abalwimi zabo isiisNgesi nesi-Afrikansi. Kunyanzelekile ukuba oku kwenziwe kulo lonke ulutsha lwethu.
Egameni lolutsha lwethu sicela urhulumente ukuba ayenze ibe yephambili into yokusebenza koMgaqo woLwimi kwezeMfundo ngaphaya kweminyaka yokuqala yesikolo samabanga asezantsi ukwenzela ukuba lonke ulutsha lwethu luzuze ngokulinganayo kwimfundo yalo. Inyathelo lokuqala ingakukwenza izinto zokufunda zifumaneke ngazo zoli-11 iilwimi zaseburhulumenteni.
Simema lonke ulutsha ukuba ilizwi lalo livakale ekubangeni amalungelo alo njengabemi abapheleleyo belizwe loMzantsi Afrika elilawulwa ngedemokhrasi. Ixesha lokuba abantwana babekho kodwa ilizwi labo lingaviwa lidlule. Lilungelo lakho ukulusebenzisa nokulukhulisa ulwimi lwakho ngeli xesha ufunda ezinye. Akukho nalunye ulwimi olungaphantsi kunolunye ngako oko ummi ngamnye woMzantsi Afrika umele ukuzingca ngenkcubeko yakhe. Ngokusebenzisa zonke iilwimi zethu ulutsha lwethu maluncedise ekusasazeni uxolo nokuqondana.
Lwanga ulutsha lungaqhuba nesithethe esiliqhayiya sokuvakalisa ilizwi lalo  ukwenzela ukuba luviwe!
Lo myalezo ukhutshwa ngaba balandelayo:
Mhlobo Jadezweni (chair),
Click here for the English version of the I-MAG Media Statement